Mpanamboatra sy mpamatsy firaka vita amin'ny firaka - orinasa mpiorina firaka China
Famaritana ASTM B265 Titanium plate / Titanium sheet Material 1: Titanium madio, tanjaka ambany dia ambany ary fahamaotinana avo. Kilasy 2: Ny titanium madio ampiasaina indrindra. Ny fampifangaroana tsara indrindra amin'ny tanjaka, ny fikojakojana ary ny fanamafisana. Kilasy 3: Titanium matanjaka be, ampiasaina amin'ny takelaka Matrix amin'ny fifanakalozana hafanana sy fantsom-pandrefesana. Kilasy 5: ny firaka titanium vita am-panamboarana indrindra. Hery lehibe izaitsizy. fanoherana ny hafanana avo. Kilasy 7: fanoherana ny harafesina avo lenta amin'ny fampihenana sy fanamafisana ny tontolo iainana ...
Takelaka firaka nickel / sheet inconel 600 601 625 X-750 718 825
Anaran'ny vokatra Nickel Alloy Plate / sheet inconel 600 601 625 X-750 718 825 Material Monel / Inconel / Hastelloy / Duplex Steel / PH Steel / Nickel Alloy Shape Round, forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Spherical, Ribbon, Square, Bar, Pipe, Sheet Grade Duplex: 2205 (UNS S31803 / S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760 (Zeron 100), 2304,904L Hafa: 253Ma, 254SMo, 654SMo, F50 (UNSS32100) F60, F61, F65,1J22, N4, N6 sns Alika: Alloy 20/28/31 Hastelloy: HastelloyB / -2 / B-3 / C22 / C-4 / S / C276 / C-2000 / G-3 ...